सुरुङमार्गको सेयर किन्दा डुब्यो जनताको ३१ करोड | Himalaya Post
सुरुङमार्गको सेयर किन्दा डुब्यो जनताको ३१ करोड
Posted by Himalaya Post | २० पुष २०७८, मंगलवार ०८:१७ |
काठमाडौं – भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग बन्ने सुनेपछि भीमफेदीका सानु थापाले ऋण खोजेर २ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद गरे। तर, उक्त सेयर रकम के भयो रु कम्पनी कहाँ पुग्यो ? यसबारे उनलाई अहिले अत्तोपत्तो छैन । यस्तै, भीमफेदीस्थित सुपिङका रामप्रसाद पुडासैनीले मासिक २ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी १ लाख ऋण लिएर सेयर किने । उनले चार वर्ष लगाएर ऋण चुक्ता गरे ।
कुलेखानी खानीखेतका विष्णुकुमार पुडासैनीले मकै बेचेर १० हजार लगानी गरे । तर, यसरी जुटेको जनताको करिब ३१ करोड रकम डुबेको छ ।
निजी निर्माण कम्पनी र सरकार दुवैले आयोजनाबाट हात झिकेका छन् । जुन आयोजनामा मकवानपुरसहित ललितपुर, चितवन, धादिङलगायत जिल्लाका ३ हजार स्थानीयवासीले खसी–बाख्रा, भैंसी बेचेर १० हजारदेखि १ लाखसम्म लगानी गरेका थिए । मकवानपुरबाट मात्र करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी भएको सेयर सदस्य तथा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण कटवालले बताए । कम्पनी घाटामा गए पनि आयोजना नबने पनि विपन्न नागरिकको पैसा फिर्ता गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल)ले २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि उक्त कम्पनीले जनतासँग रकम संकलन गरेको थियो। ३० वर्षभित्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी संघीय सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण अवधि सन् २०२१ सम्म थप गरेको थियो । तर, उक्त कम्पनी सरकारी निकायको सम्पर्कमा छैन । संकलित रकम भने उसले विभिन्न बहानामा खर्चिएको जनाइएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
Previousललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण : अनुसन्धान पुग्यो अन्तिम चरणमा
Nextफाइनान्सलाई ‘फाइनान्स बैंक’का रुपमा परिभाषित गर्न सुझाव
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १५:०६
म्याक्स मेडिटेकको माफियागिरी !
८ कार्तिक २०७८, सोमबार १३:२६